OSPF – Part5(OSPF Network Types) - BIM Trainings
OSPF Network type တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF network type တွေဟာ အသုံးပြုနေတဲ့ media device ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းလဲ ရှိပါတယ်။ ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ- အသုံးပြုနေတဲ့ media က Ethernet လား၊ Frame Relay လား၊ PPP လား စတဲ့ media ပေါ်မူတည်ပြီး OSPF network type တွေ ကွဲသွားပါတယ်။
OSPF Network type ကွဲသွားတာနဲ့အမျှ-
Hello message ပို့တဲ့ပုံစံ ၊ update ပို့တဲ့ပုံစံ ကွဲသွားပါတယ်။
ဘယ် router က neighbor adjacency form လဲ ?
Next hop calculation process ဘယ်လိုတွက်မလဲ စတာတွေပါ ကွဲပြားသွားပါတယ်။
OSPF network type တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
OSPF router တွေအချင်းချင်း neighbor ဖြစ်ဖို့ network type တူဖို့ လိုပါသလား? တူဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် compatible ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်မနေ တူရမယ့် attribute တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ timer လို attribute တွေ တူဖို့တော့ လိုပါတယ်။
OSPF network type compatible ဖြစ်ဖို့ ဘယ်အချက်ကို အခြေခံသလဲ? LSA Type2usage ကို အခြေခံပြီး network type တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု compatible ဖြစ်၊ မဖြစ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ် network type တွေက LSA type2ကို သုံးသလဲဆိုတာ သိဖို့ လိုလာပါတယ်။ LSA type2အကြောင်းသိဖို့ လိုပါတယ်။ OSPF LSA type2လို့ခေါ်တဲ့ Network LSA အကြောင်း အထိုက်အလျောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ထပ်ပြီး အနည်းငယ် ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
LSA type2လို့ network LSA ကို Designated Router က generate လုပ်ပါတယ်။ DR နဲ့ ဘယ်တူတွေ neighbor ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ဧရိယာတွေဆီကိုတော့ မပို့လွှတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို တခြား ဧရိယာတွေကို မပို့လွှတ်တဲ့အတွက် OSPF operation ကို optimize လုပ်ရာရောက်ပါတယ်။ OSPF adjacency အရေတွက် လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ LSA replication ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ SPF calculation လုပ်တဲ့အခါ မရှုပ်ထွေးခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့် OSPF operation ကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။
အဲဒီတော့ LSA type2ကိုသုံးနေတဲ့ Network type တွေနဲ့ မသုံးတဲ့ Network type တွေကို သိဖို့ လိုလာပြန်ပါ တယ်။
LSA type2ကို အသုံးပြုတဲ့ network type တွေကတော့–
LSA type2ကို အသုံးမပြုတဲ့ network type တွေကတော့-
Point-to-Multipoint Non-Broadcast တို့ဖြစ်ပါတယ်။
OSPF Network Broadcast Type
OSPF Broadcast network type ကိုဘယ်လို media တွေမှာ တွေ့လေ့ရှိသလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် Ethernet, Token Ring, FDDI media device တွေပေါ်မှာဆို OSPF broadcast network type ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက multi access network တွေမှာ သုံးတယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ media device တွေပေါ်မှာ OSPF run လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ default OSPF network type တွေက Broadcast network type ဖြစ်ပါတယ်။
Hello ပို့လွှတ်ဖို့၊ update ပို့လွှတ်ဖို့အတွက် Multicast address ဖြစ်တဲ့ 224.0.0.5 နဲ့ 224.0.0.6 ကို အသုံးပြုပါ တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ Hello နဲ့ update ကို 224.0.0.5 ဆီပို့လွှတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် SPF router အားလုံးက 224.0.0.5 ကို listen လုပ်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက 224.0.0.6 ဆီကိုလည်း ပို့လွှတ်ပါတယ်။ DR အားလုံးက 224.0.06 ကို listen လုပ်နေပါတယ်။ နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ DR က 224.0.0.6 နဲ့ listen လုပ်ပြီး၊ LSU တွေကို 224.0.0.5 တွေဆီ ပြန်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။broadcast network type မှာ DR / BDR election ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် type2LSA ကို အသုံးပြုပါတယ်။
OSPF Network Non-Broadcast
OSPF Non-Broadcast ကိုတော့ multipoint NBMA media တွေဖြစ်တဲ့ Frame Relay နဲ့ ATM တွေမှာ တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒီ network တွေက multi access လည်း လုပ်ချင်တယ်။ broadcast လွှတ်ဖို့ကျပြန်တော့လည်း လက် မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် Non-Broadcast Multi Access (NBMA) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ OSPF network type ကလည်း Non-Broadcast type ဖြစ်ပါတယ်။ Hello packet ပို့လွှတ်တဲ့အခါ multicast ကို မသုံးတော့ဘဲ unicast ကို သုံးပါတယ်။Multi access network ဖြစ်တဲ့အတွက် DR, BDR election ရှိပါ တယ်။ အဲဒီတော့ LSA type2လိုလည်း သုံးရတာပေါ့။
DR and BDR အလုပ်လုပ်ပုံ
အခု ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Broadcast နဲ့ Non-Broadcast တွေမှာ DR/ BDR election ပါလာတော့ DR/BDR ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ သိဖို့လိုလာပါပြီ။
DR , BDR and DROther
Link ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ OSPF router အားလုံးနဲ့ adjacency form တည်ဆောက်ပါတယ်။ LSU အတွက် 224.0.0.6 ကို Listen လုပ်ပြီး၊ လက်ခံရရှိထားတဲ့ LSU တွေကို 224.0.0.5 ဆီကို re-flood ပြန်လုပ်ပါတယ်။ next hop value ကိုတော့ modification မလုပ်ပါဘူး။ BDR ကတော့ DR ရဲ့ redundancy အနေနဲ့ အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ LSU ကို ပြန်ပြီး re-flood မလုပ်ပါဘူး။
DROther ဆိုတာကတော့ DR လည်း မဟုတ်၊ BDR လည်း မဟုတ်တဲ့ OSPF router အားလုံးကို ခေါ်တာဖြစ်ပါ တယ်။ DR နဲ့ရော၊ BDR နဲ့ရော fully adjacency form တည်ဆောက်ပါတယ်။
DR/ BDR ရွေးချယ်ဖို့ ပထမဆုံးကြည့်တာက priority ဖြစ်ပါတယ်။ priority က0– 255 ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ priority တန်ဖိုးအကြီးဖြစ်တဲ့ router ကို DR အဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ်။ priority0ဆိုရင်တော့ DR/BDR election process မှာ မပါဝင်နိုင်တော့ပါဘူး။
အကယ်၍ priority တန်ဖိုးတူနေခဲ့ရင် Router ID ကိုကြည့်ပြီး ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Router ID တန်ဖိုး အကြီးဆုံး router ကို DR အဖြစ် ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Router ID ကို Manually သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ best practice ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ manually မသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရင် Loopback interface ရှိခဲ့ရင် IP တန်ဖိုးအကြီးဆုံးကို Router ID အဖြစ် သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Loopback interface လည်း မရှိဘူးဆိုရင်၊ physical interface တွေထဲက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး IP ကို router ID အဖြစ် သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
HDLC,PPP,GRE interface တွေမှာ default OSPF network က point-to-point ဖြစ်ပါတယ်။multicast 224.0.0.5 ကို hello ပို့လွှတ်ပါတယ်။ DR/ BDR election မရှိပါဘူး။ point to point ဖြစ်တဲ့အတွက် neighbor နှစ်ခုပဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ router နှစ်လုံးထဲ ဆရာ၊ တပည့် ရွေးစရာမလိုတဲ့အတွက် LSA type2လည်း မလိုတော့ပါ ဘူး။
Partial mesh အဖြစ်သုံးနေတဲ့ Hub and Spoke network ပုံစံကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ spoke router တွေက Hub router ဆီကို point to point network ပုံစံနဲ့ လာရောက်ချိတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်။ spoke router ဘက်ကကြည့်ရင် သူ့ရဲ့ တခြားတစ်ဘက်မှာ Hub router ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ spoke router တွေက Hub router ကို point to point အသွင်နဲ့ လာရောက် ချိတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်။ Hub router ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ ကျတော့ သူ့ကိုလာချိတ်ထားတဲ့ spoke တွေက အများကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Hub router က point to point ပုံစံနဲ့ မတုန့်ပြန်တော့ဘဲ point to multipoint network ပုံစံနဲ့ ပြန်ပြီး respond လုပ်မှသာ သင့်တော် ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် hub router က သူ့ကို လာရောက်ချိတ်ဆက်ကြတဲ့ point to point link အားလုံးကို စုပြီး point to multipoint အနေနဲ့ ပြန်လည် ချိတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒီလို partial mesh NBMA network တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ multicast 224.0.0.5 ကို hello message ပို့လွှတ်ပြီး၊ DR/BDR election မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် special next hop processing ရှိပါတယ်။
Point-to-multipoint နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတူပါတယ်။ တစ်ခုပဲကွာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ hello message ပို့တဲ့အခါ unicast ကိုသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DR/BDR election မရှိဘူး။ neighbor command ကိုသုံးပြီး manually define လုပ်ပေးရပါတယ်။
OSPF Network type တှအေကွောငျး ဆှေးနှေးပါ့မယျ။ OSPF network type တှဟော အသုံးပွုနတေဲ့ media device ပျေါမူတညျပွီး အပွောငျးလဲ ရှိပါတယျ။ ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ- အသုံးပွုနတေဲ့ media က Ethernet လား၊ Frame Relay လား၊ PPP လား စတဲ့ media ပျေါမူတညျပွီး OSPF network type တှေ ကှဲသှားပါတယျ။
OSPF Network type ကှဲသှားတာနဲ့အမြှ-
Hello message ပို့တဲ့ပုံစံ ၊ update ပို့တဲ့ပုံစံ ကှဲသှားပါတယျ။
ဘယျ router က neighbor adjacency form လဲ ?
Next hop calculation process ဘယျလိုတှကျမလဲ စတာတှပေါ ကှဲပွားသှားပါတယျ။
OSPF network type တှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။
OSPF router တှအေခငျြးခငျြး neighbor ဖွဈဖို့ network type တူဖို့ လိုပါသလား? တူဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဈဘကျနဲ့တဈဘကျ compatible ဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ မဖွဈမနေ တူရမယျ့ attribute တှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ timer လို attribute တှေ တူဖို့တော့ လိုပါတယျ။
OSPF network type compatible ဖွဈဖို့ ဘယျအခကျြကို အခွခေံသလဲ? LSA Type2usage ကို အခွခေံပွီး network type တဈခုနဲ့ တဈခု compatible ဖွဈ၊ မဖွဈ ဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဘယျ network type တှကေ LSA type2ကို သုံးသလဲဆိုတာ သိဖို့ လိုလာပါတယျ။ LSA type2အကွောငျးသိဖို့ လိုပါတယျ။ OSPF LSA type2လို့ချေါတဲ့ Network LSA အကွောငျး အထိုကျအလြောကျ ဆှေးနှေးခဲ့ပွီးပါပွီ။ ထပျပွီး အနညျးငယျ ဆှေးနှေးပါ့မယျ။
LSA type2လို့ network LSA ကို Designated Router က generate လုပျပါတယျ။ DR နဲ့ ဘယျတူတှေ neighbor ဖွဈနတေယျဆိုတာ ဖျောပွပေးဖို့ ဖွဈပါတယျ။ တခွား ဧရိယာတှဆေီကိုတော့ မပို့လှတျပါဘူး။ အဲဒီလို တခွား ဧရိယာတှကေို မပို့လှတျတဲ့အတှကျ OSPF operation ကို optimize လုပျရာရောကျပါတယျ။ OSPF adjacency အရတှေကျ လြှော့ခနြိုငျခွငျး၊ LSA replication ကို လြှော့ခနြိုငျခွငျး၊ SPF calculation လုပျတဲ့အခါ မရှုပျထှေးခွငျး စတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့ OSPF operation ကို သကျသောငျ့သကျသာ ဖွဈစပေါတယျ။
အဲဒီတော့ LSA type2ကိုသုံးနတေဲ့ Network type တှနေဲ့ မသုံးတဲ့ Network type တှကေို သိဖို့ လိုလာပွနျပါ တယျ။
LSA type2ကို အသုံးပွုတဲ့ network type တှကေတော့–
LSA type2ကို အသုံးမပွုတဲ့ network type တှကေတော့-
Point-to-Multipoint Non-Broadcast တို့ဖွဈပါတယျ။
OSPF Broadcast network type ကိုဘယျလို media တှမှော တှလေ့ရှေိ့သလဲ?
ပုံမှနျအားဖွငျ့ Ethernet, Token Ring, FDDI media device တှပေျေါမှာဆို OSPF broadcast network type ကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဆိုလိုတာက multi access network တှမှော သုံးတယျလို့ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။အဲဒီ media device တှပေျေါမှာ OSPF run လိုကျတယျဆိုရငျပဲ default OSPF network type တှကေ Broadcast network type ဖွဈပါတယျ။
Hello ပို့လှတျဖို့၊ update ပို့လှတျဖို့အတှကျ Multicast address ဖွဈတဲ့ 224.0.0.5 နဲ့ 224.0.0.6 ကို အသုံးပွုပါ တယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ဆိုရငျတော့ Hello နဲ့ update ကို 224.0.0.5 ဆီပို့လှတျပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ SPF router အားလုံးက 224.0.0.5 ကို listen လုပျနပေါတယျ။ နောကျတဈခုက 224.0.0.6 ဆီကိုလညျး ပို့လှတျပါတယျ။ DR အားလုံးက 224.0.06 ကို listen လုပျနပေါတယျ။ နားလညျအောငျ ပွောရရငျတော့ DR က 224.0.0.6 နဲ့ listen လုပျပွီး၊ LSU တှကေို 224.0.0.5 တှဆေီ ပွနျပို့ပေးတာဖွဈပါတယျ။broadcast network type မှာ DR / BDR election ရှိတယျ။ အဲဒီအတှကျ type2LSA ကို အသုံးပွုပါတယျ။
OSPF Non-Broadcast ကိုတော့ multipoint NBMA media တှဖွေဈတဲ့ Frame Relay နဲ့ ATM တှမှော တှရေ့ပါ လိမျ့မယျ။ ဒီ network တှကေ multi access လညျး လုပျခငျြတယျ။ broadcast လှတျဖို့ကပြွနျတော့လညျး လကျ မခံနိုငျဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ Non-Broadcast Multi Access (NBMA) လို့ ချေါကွပါတယျ။ သူတို့နဲ့ သငျ့တျောတဲ့ OSPF network type ကလညျး Non-Broadcast type ဖွဈပါတယျ။ Hello packet ပို့လှတျတဲ့အခါ multicast ကို မသုံးတော့ဘဲ unicast ကို သုံးပါတယျ။Multi access network ဖွဈတဲ့အတှကျ DR, BDR election ရှိပါ တယျ။ အဲဒီတော့ LSA type2လိုလညျး သုံးရတာပေါ့။
DR and BDR အလုပျလုပျပုံ
အခု ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ Broadcast နဲ့ Non-Broadcast တှမှော DR/ BDR election ပါလာတော့ DR/BDR ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယျလို အလုပျလုပျသလဲ သိဖို့လိုလာပါပွီ။
Link ပျေါမှာရှိနတေဲ့ OSPF router အားလုံးနဲ့ adjacency form တညျဆောကျပါတယျ။ LSU အတှကျ 224.0.0.6 ကို Listen လုပျပွီး၊ လကျခံရရှိထားတဲ့ LSU တှကေို 224.0.0.5 ဆီကို re-flood ပွနျလုပျပါတယျ။ next hop value ကိုတော့ modification မလုပျပါဘူး။ BDR ကတော့ DR ရဲ့ redundancy အနနေဲ့ အလုပျလုပျ ပါတယျ။ LSU ကို ပွနျပွီး re-flood မလုပျပါဘူး။
DROther ဆိုတာကတော့ DR လညျး မဟုတျ၊ BDR လညျး မဟုတျတဲ့ OSPF router အားလုံးကို ချေါတာဖွဈပါ တယျ။ DR နဲ့ရော၊ BDR နဲ့ရော fully adjacency form တညျဆောကျပါတယျ။
DR/ BDR ရှေးခယျြဖို့ ပထမဆုံးကွညျ့တာက priority ဖွဈပါတယျ။ priority က0– 255 ထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ priority တနျဖိုးအကွီးဖွဈတဲ့ router ကို DR အဖွဈ ရှေးခယျြပါတယျ။ priority0ဆိုရငျတော့ DR/BDR election process မှာ မပါဝငျနိုငျတော့ပါဘူး။
အကယျ၍ priority တနျဖိုးတူနခေဲ့ရငျ Router ID ကိုကွညျ့ပွီး ဆကျလကျယှဉျပွိုငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Router ID တနျဖိုး အကွီးဆုံး router ကို DR အဖွဈ ရှေးခယျြမှာ ဖွဈပါတယျ။ Router ID ကို Manually သတျမှတျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကတော့ best practice ဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ manually မသတျမှတျပေးခဲ့ရငျ Loopback interface ရှိခဲ့ရငျ IP တနျဖိုးအကွီးဆုံးကို Router ID အဖွဈ သတျမှတျပါလိမျ့မယျ။ အကယျ၍ Loopback interface လညျး မရှိဘူးဆိုရငျ၊ physical interface တှထေဲက တနျဖိုးအကွီးဆုံး IP ကို router ID အဖွဈ သတျမှတျပါလိမျ့မယျ။
HDLC,PPP,GRE interface တှမှော default OSPF network က point-to-point ဖွဈပါတယျ။multicast 224.0.0.5 ကို hello ပို့လှတျပါတယျ။ DR/ BDR election မရှိပါဘူး။ point to point ဖွဈတဲ့အတှကျ neighbor နှဈခုပဲ ရှိနိုငျပါတယျ။ router နှဈလုံးထဲ ဆရာ၊ တပညျ့ ရှေးစရာမလိုတဲ့အတှကျ LSA type2လညျး မလိုတော့ပါ ဘူး။
Partial mesh အဖွဈသုံးနတေဲ့ Hub and Spoke network ပုံစံကို မွငျယောငျကွညျ့ပါ။ spoke router တှကေ Hub router ဆီကို point to point network ပုံစံနဲ့ လာရောကျခြိတျဆကျကွပါလိမျ့မယျ။ spoke router ဘကျကကွညျ့ရငျ သူ့ရဲ့ တခွားတဈဘကျမှာ Hub router ပဲရှိပါတယျ။ အဲဒီတော့ spoke router တှကေ Hub router ကို point to point အသှငျနဲ့ လာရောကျ ခြိတျဆကျကွပါလိမျ့မယျ။ Hub router ဘကျကကွညျ့တဲ့အခါ ကတြော့ သူ့ကိုလာခြိတျထားတဲ့ spoke တှကေ အမြားကွီး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Hub router က point to point ပုံစံနဲ့ မတုနျ့ပွနျတော့ဘဲ point to multipoint network ပုံစံနဲ့ ပွနျပွီး respond လုပျမှသာ သငျ့တျော ပါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့ hub router က သူ့ကို လာရောကျခြိတျဆကျကွတဲ့ point to point link အားလုံးကို စုပွီး point to multipoint အနနေဲ့ ပွနျလညျ ခြိတျဆကျပါတယျ။ ဒီလို partial mesh NBMA network တှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။ multicast 224.0.0.5 ကို hello message ပို့လှတျပွီး၊ DR/BDR election မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ special next hop processing ရှိပါတယျ။
Point-to-multipoint နဲ့ အလုပျလုပျပုံတူပါတယျ။ တဈခုပဲကှာပါတယျ။ အဲဒါကတော့ hello message ပို့တဲ့အခါ unicast ကိုသုံးတာပဲဖွဈပါတယျ။ DR/BDR election မရှိဘူး။ neighbor command ကိုသုံးပွီး manually define လုပျပေးရပါတယျ။